Ukudla - Mag Incredible
Izinzuzo Zezempilo Ezi-6 Nokusetshenziswa Kubeetroot
Izimpande ze-beet zingenye yokudla okuphezulu okungathuthukisa ukusebenza kwezemidlalo. Ngokunambitheka okumnandi okumnandi nombala, ama-beet abomvu asiza ukuvikela izifo ezinjengomdlavuza, izinqwaba nezifo zenhliziyo. Isiza ukunciphisa ingozi yokukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala. Kepha akunakuba…
Namuhla kukhona inani elikhulu lamavithamini, amaphilisi okudla nezithako zokudla okunomsoco okuthiwa kungokwemvelo. Kepha, uzwile nge-Superfoods? Hlala ufunde ukuthi yini le mkhuba omusha osemkhakheni wokudla okunempilo. Bayini? Ama-Superfoods ayi-100%…
Izinzuzo Zamafutha Kakhukhunathi, Enye Yamafutha Ahamba Phambili Okudliwayo
Kwangathi 29, 2022
Uwoyela kakhukhunathi bekulokhu kuwumkhuba wendabuko we-Ayurvedic, uqukethe izinombolo eziningi zezinzuzo zezempilo, Ulungele ukunakekelwa kwesikhumba futhi usetshenziswe ekhishini, kungamafutha amahle kakhulu wokubhucungwa, okusiza ukunciphisa isifo se-Alzheimer's. Njalo khetha uwoyela kakhukhunathi ocindezelwe abandayo ngoba…
Umkhiqizo weCorn Flakes Cereal Inketho Efanele Yesidlo Sakusasa
by U-Evan G.
Imikhiqizo yokudla kwasekuseni kusuka ku-muesli kuya ku-granola etholakala emakethe ayipheli. Kumele uqiniseke ukuthi uhlala ukhetha uphethiloli ofanele womzimba wakho ukuze uqale kahle. Kufanele babe nokuqukethwe okunomsoco futhi kube lula…
Izinzuzo Ezinhlanu Ezimangazayo Zezempilo Zijusi Yamakhabe
Kwangathi 17, 2022
Ikhabe kungenye yokudla okunempilo ehlobo, liqukethe ama-92% wamanzi, izakhamzimba, amavithamini kanye namaminerali. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwekhabe okungathuthukisa impilo yakho yenhliziyo, Kungenye yomthombo ocebile wama-carbohydrate, amaprotheni, i-fiber. nekhabe linganciphisa…
Ukudla Oku-5 Okufanele Kudliwe Umndeni Wakho
Kwangathi 10, 2022
Kukhona ukudla okuthile okuletha izakhamzimba eziningi ezingathathwa njengokudla okuphezulu, futhi imvamisa siyakhohlwa ukukufaka ekudleni kwethu. Lapha sizokutshela ukuthi yini futhi sikunikeze imibono yokuthi ungazinikeza kanjani izingane zakho ukuba zizidle…
Izinzuzo Ezi-7 Ezimangalisayo Zezempilo Zokungeza I-Beetroot Ekudleni Kwakho
Kwangathi 2, 2022
IBeetroot ingenye yokudla okusetshenziswa kakhulu, Iqukethe amavithamini namaminerali agcwele. Kubandakanya uvithamini A, uvithamini C, uvithamini B6, B1, B2, isodiyamu, ikhalsiyamu, isibabule, ithusi, iodine, ushukela wemvelo, i-potassium, Isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni ushukela, Ine-…
Isimangaliso Senzeka Lapho Ufaka Imbewu Yesesame Ekudleni Kwakho!
Funda zonke izinzuzo ezinkulu zezempilo ezinikezwa yizinhlamvu zesame. Kungani izinyoni kufanele zijabule kangaka? Leyo yindaba yakudala lapho okhokho bakho abakhulu benikeza izinhlamvu zesame ezinyonini njengokudla noma bakujabulela nge-burger bap noma i-prawn toast. Lezi…
Izinzuzo Eziyisithupha Zezempilo Zebhanana
Ubhanana isithelo esithandwa kakhulu, ongasidla ugijime, Sinothile nge-magnesium, calcium, fibre novithamini A no-E, ayabiza, Ubhanana Usiza Ukuphefumula Okulula, okunye kokudla kwasekuseni okuhle kakhulu. Iqukethe izinzuzo eziningi zezempilo, ngokunakekelwa kwesikhumba…
6 Amakhambi Akusiza Ukwehlisa Isisindo Ngokushesha
Amakhambi nezinongo nazo zengeza ukunambitheka ezitsheni zethu zaseNdiya. Ukusetshenziswa kwezinkomishi eziningana zetiye eliluhlaza okungakusiza nokuthi wehlise isisindo, amakhambi angakusiza ukusheshisa imetabolism yakho yokushisa amafutha, nayi eminye yemithi yamakhambi yokwehlisa isisindo. Okuluhlaza okotshani…